I-Rock House Cottage, iimbono, ilali kunye nokuhamba
I-Rock House Cottage ineembono ezilungileyo kakhulu edolophini, kodwa kukuhamba umzuzu nje ukusuka kwisikwere esinee-pubs ezintathu, iindawo zokutyela ezimbini kunye neevenkile ezininzi zekofu.
Njengelali, indlwana yethu indala kakhulu, izitepsi zimqengqelezi, zimxinwa kwaye azibambeki. Igumbi lineensuite, idesika kunye nekona yesofa. Isidlo sakusasa sase-Continental sibandakanyiwe, ngokuqhelekileyo kunye nesonka sika-Andy. Sibambe isilinganiselo sokucoceka kokutya kweenkwenkwezi ezi-5.
Sihlala apha kuba igqibelele; ubomi belali, ukuhamba, ukukhwela ibhayisekile entabeni kunye nokunyuka.
Igumbi likhulu lineshawari yeen suite, idesika, iWi-Fi yasimahla kunye nekona yesofa epholileyo. Kukho itreyi yondwendwe eneti, ikofu, kunye neti yeziqhamo ezahlukeneyo. Ibhedi iphakanyiswe phantsi, isitulo siyafuneka ukuze ungene kwaye uphume ebhedini. Ufumana iimbono ezithandekayo kusasa kwaye kukho iimfama ezimnyama ezimnyama zokuqinisekisa ubusuku obumnyama, kunokwenzeka ukuba kuthuleke ngokubonakalayo. Igumbi linemigangatho emibini ngezantsi kwamagumbi ethu okulala kunye nomgangatho omnye ngaphezulu komgangatho ongaphantsi, livakala libucala kwaye ungangena kwaye uphume kumgangatho ongaphantsi apho unokugcina iibhayisekile kunye neebhutsi. Isitshizi sokubulala iintsholongwane siyafumaneka kwigumbi.
IGrassington yilali yakudala enezitalato ezinezitalato kunye nee-pubs ezintathu, iindawo zokutyela ezimbini, iindawo zokuthatha ezimbini, iivenkile ezininzi zekofu kunye nokhetho lweevenkile ezizimeleyo. Ngexesha eliphezulu lihlawula ukubhuka kwangaphambili kwisidlo sakusihlwa. Sihlala sonwabile ukwenza iingcebiso ukuhlangabezana neemfuno zakho.
Lilizwe eliqaqambileyo lokuhamba kwaye ndidale imfumba yohambo lwalapha ekhaya ukusuka kokufutshane ukuya kubude, ubukhulu becala ukuqala eGrassington. Sikwakunye nebhayisekile yeentaba kwaye sinokucebisa ngeendlela zasekhaya.
Ukudibana nabantu kunye nokwabelana ngendawo yethu entle zezona zizathu zokuba no-Airbnb wethu. Siyathanda ukuncokola xa usiza mhlawumbi ngesidlo sakusasa. Nangona kunjalo, wamkelekile ukuba ushiywe wedwa ukuba uyafuna. Besisaziwa sihamba sihamba sihamba ngeebhayisekile neendwendwe.
Siyaluqaphela ukhokelo lwamva nje lwe-Covid 19 kwaye sibambelela koku kangangoko sinakho.
Ukudibana nabantu kunye nokwabelana ngendawo yethu entle zezona zizathu zokuba no-Airbnb wethu. Siyathanda ukuncokola xa usiza mhlawumbi ngesidlo sakusasa. Nangona kunjalo, wamkele…